Gọọmentị Barbados na CTU gafere Metaverse
Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » Barbados » Gọọmentị Barbados na CTU gafere Metaverse
site n'ikike nke Caribbean Telecommunications Union
Kemgbe ahaziri Facebook ka Meta na 2021, Metaverse ewepụtala ọtụtụ mkparịta ụka n'ụwa niile. Site na ya wee nweta ọkwa nke mkparị n'etiti ọtụtụ… Gịnị bụ Metaverse? Ọ dị ọhụrụ? N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, Metaverse dịla nso ruo oge ụfọdụ ma bụrụ oghere 3D dị n'ịntanetị ebe enwere ike ịmekọrịta mmekọrịta. Ndị mmadụ nwere ike ịrụ ọrụ, ịzụ ahịa, na-eduzi nzukọ azụmahịa ma ọ bụ ọbụna na-akpakọrịta na Metaverse.
Na 2021, gọọmentị nke Barbados kwuputara na ọ ga-eguzobe ụlọ ọrụ nnọchiteanya na Metaverse, na-eme ka ọ bụrụ obodo mbụ n'ụwa na-eme ya. Na 2022, St Vincent na Grenadines kwupụtara atụmatụ ya ịnabata Carnival mbụ na Metaverse.
The Caribbean Telecommunications Union (CTU), na mmekorita ya na Gọọmenti Barbados, ga-anabata webinar, Traversing the Metaverse - A Caribbean Perspective, na Mọnde 31st Jenụwarị 2022 site na 9:00 ụtụtụ ruo TIME, AST. Meta na-akwado webinar.
Webinar ahụ ga-enyocha ohere akụ na ụba, mmekọrịta ọha na eze na omenala maka ndị dị iche iche dị iche iche, gụnyere gọọmenti na ụlọ ọrụ nzuzo. Ọ na-achọkwa ịkụziri na ịkwalite mmata nke ohere na ihe ịma aka maka, karịsịa, obere agwaetiti na-emepe emepe (SIDS).
"Metaverse bụ oghere dijitalụ na-akpali akpali ebe ndị mmadụ nwere ike ịrụ ọrụ n'akụkụ niile nke ndụ ha, na ntanetị. Ohere adịghị agwụ agwụ. Dị ka nzukọ na-eme mgbanwe dijitalụ na mpaghara Caribbean, CTU ghọtara mkpa ọ dị ịkọwa Metaverse site n'echiche na ọnọdụ ọnọdụ yana ịkọwa otú ndị mmadụ nwere ike isi rite uru na ya. " kwuru Mazị Rodney Taylor, odeakwụkwọ ukwu nke otu telecommunications Caribbean.
Odeakwụkwọ General Taylor gara n'ihu gbakwụnyere, "A ga-enyocha okwu ndị bụ isi dị ka mebere, agwakọta na abawanyela realty, blockchain, non-fungible tokens (NFTs), crypto-currencies, na ndị ọzọ na mgbalị iji kwalite mmata ọha na eze banyere isi okwu."
Webinar ahụ ghere oghe maka ọha mana ọ ga-elekwasị anya na ndị isi ihe dị ka ndị na-eme amụma ICT, ndị ọkachamara n'ihe banyere akụ na ụba, ndị teknụzụ, ndị ọchụnta ego na agụmakwụkwọ.
Maka ozi ndị ọzọ na ndebanye aha, biko pịa ebe a.
Barbados Caribbean Ntu Government Grenadine
El Salvador gbara ume ka ọ tụfuo Bitcoin dị ka ego gọọmentị n'ihi 'nnukwu ihe egwu'
Turkey: Imeghe ụzọ maka gastronomy na-adigide
Ọrịa Neurological na-akwalite mkpali ụbụrụ miri emi...
FICCI na-akwalite draịva dijitalụ na India na-abịa…